चर्को छुटको पनि विरोध ! « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
चर्को छुटको पनि विरोध !
प्रकाशित मिति : २०७६, १४ मंसिर शनिबार ११:३२
चर्को महँगीको विरोध त हुन्छ नै, तर सामानमा पाइने चर्को छुटको पनि विरोध भएको सुन्नुभएको छ ? त्यो पनि उपभोक्ताले ?
फ्रान्समा वस्तु तथा सेवामा दिइने अत्यधिक छुटको विरोध हुँदो रहेछ । अस्वाभाविक सस्तो हुँदा अनावश्यक खपत बढ्ने र वातावरणलाई ठूलो असर पुग्ने भनेर त्यहाँ यस्तो छुटको भयङ्कर विरोध गरिने रहेछ ।
अमेरिका र युरोपका धेरै देशमा आजको दिन ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ का रूपमा चर्चित छ र यो दिन किनमेलमा ७०% सम्म छुट पाइने हुनाले खरबौं रुपियाँको व्यापार हुने गरेको छ । हिजो अर्थात् नोभेम्बर महिनाको चौथो बिहिबार कृषक र भगवान् लाई धन्यवाद ज्ञापन गरेपछि त्यसको भोलिपल्टको शुक्रबारलाई ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ भनिन्छ र यस दिन व्यापक रूपमा किनमेल हुने गर्दछ । अमेरिकामा आजमात्रै ६ अर्ब डलरको कारोबार हुने अनुमान छ । धेरै मान्छे किनमेलका लागि आजको दिन पर्खिने गर्दछन् ।
तर फ्रान्समा भने यस्तो छुटविरुद्ध अभियान चल्दो रहेछ । अर्को वर्षदेखि फ्रान्सले ‘ब्ल्याक फ्राइडे सेल’लाई नै प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने खबर पढ़ियो । त्यहाँ वर्षमा दुई पल्टमात्रै यसखाले छुट दिन पाइने नियम रहेछ । आज पनि त्यहाँ अमेजनलगायतका ठूला विक्रेताहरूको गेट अगाडि अभियन्ताहरू जम्मा भएर कारोबार ठप्प पारेको समाचार छ ।
सस्तो भएपछि आवश्यक नपर्ने सामान पनि किनिने, उत्पादन बढ्दा गरिब देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन हुने, काम लाग्ने र केही वर्ष अझै चल्ने सामान पनि फ़्याँकिने र एकदुई पल्ट छुट दिनका लागि वर्षभर महँगोमा सामान बेचिने लगायतका तर्कहरू त्यसका पछाडि दिइने रहेछ । फ्रान्समैं बस्नेहरूको प्रतिक्रिया पढ्न पाइन्छ कि ?